Kee tahay ganacsade? | vfxAlert official blog
Kee tahay ganacsade?
Koorsooyinka tababarka iyo boggaga internetka ee ku saabsan sida lacag looga helo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah waxay diiradda saaraan daraasadda falanqaynta farsamada iyo aasaasiga ah, astaamaha goobaha ganacsiga. Aqoontaas oo dhami waa waxtar, laakiin sida dhammaan qaybaha waxqabadka aadanaha, waxay aasaas u yihiin wax kasta oo cilmi nafsi ah. Kahor intaadan furin ganacsiga koowaad, aan ku qeexno sawirkaaga nafsi ahaaneed inuu yahay ganacsade.
Su'aal kasta, ka xusho afar ikhtiyaar warbixinta kugu habboon adiga:
Waa maxay ujeedada ganacsigaagu?
Helitaanka dakhli dheeri ah oo loogu talagalay isticmaalka hadda;
Kaydinta iyo keydinta mustaqbalka;
Dib-u-maalgelinta ganacsiga cusub (ka-faa'iideysiga lacagaha);
Isu soo uruurinta iibsiyada waaweyn (guryaha, baabuurta, iwm.).
Maxay yihiin waxyaabaha laga filayo calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ?
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo wax ka badan Bangiga boqolkiiba. Isla mar ahaantaana, waxaan diyaar u ahay inaan qatar galo oo aan fahmo in rajadayda laga yaabo inaan la gaadhin;
Helitaanka dakhli kasta oo dheeri ah;
Dakhli kasbashada heerka boqolkiiba bangiga iyo sicir bararka;
Waxaan xiiseynayaa habka ganacsiga maaliyadeed.
Maalgelinta lacagtaadu waxay dareemeysaa raaxo xaaladaha jira:
Dhaqso u dhaqso, adoo adeegsanaya awoodaha;
Isla mar ahaantaana, awood u yeelo inaad caawiso dadka kale;
Markuu jiro qorshe maaliyadeed oo cad;
Si faa'iido leh uga ganacsada istiraatiijiyaddaada;
Markaad dareento isbeddel xoog leh oo ku saabsan hantida ganacsiga:
Farxad weyn oo qarka u saaran taxaddar la'aan;
Farxad, iyadoo aan luminayn xakamaynta naftaada;
Kaliya xasilloonida iyo raacitaanka istiraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah : suuqa wuu rogi karaa wakhti kasta.
Qeyb noocee ah lacagaha ayaa diyaar u ah inay qatar galaan?
Khasaaraha la xakameynayo waa la ogol yahay iyadoo la bixinayo mustaqbalka soo noqoshada oo sarreeya;
Waxaan la tashan doonaa asxaabta waxaanan gaari doonaa go'aan wadajir ah;
Khatartu aniga ma aqbali karo;
Fur ikhtiyaar aan ka badnayn 10% Deposit-ka hadda jira;
Qaado hiwaayad aad jeceshahay;
Caawinta dadka u baahan;
Samee qorshooyin mustaqbalka ah;
Xisaabi oo falanqee sida calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ahi u shaqeeyaan .
Marka ay timaado lacagtaada, waxaad u muuqataa inaad:
Sug daqiiqad wanaagsan macaamilka;
Ha iloobin dadnimada iyo naxariista;
Raac xeerarka istiraatiijiyadda;
Ka fikir in ganacsaduhu uu guuleysto haddii:
Kama baqay inaad qatar galiso qadar kasta;
Wuxuu lacagtiisa u adeegsadaa inuu ku caawiyo bulshada;
Dhaqaale iyo xilkasnimo;
Wuxuu u fikiraa si madax banaan.
Markaad furanayso macaamil ganacsi, waxaa kugu hagaya:
Tilmaamaha ka imanaya xirfadleyda iyo calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ;
Xaqiiqooyinka iyo tirakoobka;
Markii aan kasbannay qaddarka loo baahan yahay, waxaan jeclaan lahayn inaan nolosheena u hurno:
Hiwaayadaha ugu jecel.
Haddii aad ku guuleysato bakhtiyaanasiibka, waxaad u badan tahay inaad ku qarash gareyso:
Mar labaad ayaan maalgashan doonaa ganacsiga;
Iibsashada hantida maadiga ah.
Waa laguu majeertaa;
Waad ku mahadsan tahay;
U sheeg saaxiib lacag badan ku lumay goobaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah :
Way dhacdaa. Muddo ka dib waad soo kaban kartaa khasaaraha;
Haddii aad aaminsan tahay istiraatiijiyaddaada ganacsiga, sii wad inaad raacdo, faa'iidaduna waa hubaal inay noqon doonto;
Kahor intaadan furin, waa inaad si taxaddar leh uga fikirtaa tallaabooyinkaaga;
Ha aaminin marka ay suuqu u muuqato mid aad ufiican aragtida hore.
Shaqo noocee ah ayaad iskaa u doorataa nafsadaada shirkad maaliyadeed (haddii aad u malaynaysid dakhli isku mid ah?)
Maareeyaha Adeegga Macaamiisha;
Badanaa kalsooni marka ay jirto fursad:
La jaanqaadaya isbedelka xaaladaha suuqa;
Inaad adigu noqoto;
Dareemo ixtiraamka dadka kale;
Si aad ugu hoggaansanaato joogtaynta iyo saxnaanta sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah .
Markaan maalgashi sameynayo, waxaan u maamuli doonaa lacagta sida soo socota:
Inta badan maalgelinta waxaa lagu maalgeliyaa ganacsiga;
Lacagta badankeeda waxaan dhigi doonaa bangiga; haddii kale, waxay ku baayacmushtari jireen ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah;
Hantida go'an waxaa lagu dhejin doonaa bangiga;
Wax yar ka maal gasho xulashooyinka bangiga.
La taliyayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada calaamadaha binary ee lacag bixinta ah sida vfxAlert ma yihiin kuwo lagu kalsoonaan karo?
Xulo qoraalka kuugu habboon:
Laakiin khatar la'aan, guul maleh;
Waan qaadan karaa fursad, laakiin marwalba waan joojin karaa;
Shimbir gacanta ku jirta ayaa ka wanaagsan digaag cirka ku jira oo kale.
Cabir toddobo jeer, jarjar hal jeer.
Fiiri, xarfaha ku jira jawaabaha inbadan oo go'aamiya nooca aragtidaada xagga lacagta:
1. Dalxiis. Waxay u badan tahay in lagu yiri kartida ganacsaduhu waa awooda saadaalinta waxa berri dhici doona ama sanad gudihiis, ka dibna sharax ka bixin sababta ay u dhici weyday. Waxaa jira hadiyad aragti fog, in kastoo caqligu mararka qaar fashilmo. Si fudud oo kalsooni leh khatar. Anshax xumo kuma filna, sidaas darteed qorshooyinka muddada-dheer adiga maahan adiga, waa caajis in la sameeyo.
Waxaa jira hadiyad lagu dareemo dhaq dhaqaaqa suuqa, laakiin ku xooji saadaashaada dareenka leh falanqaynta farsamada iyo aasaasiga ah, fikradaha falanqeeyayaasha iyo calaamadaha ganacsiga ikhtiyaari ikhtiyaari ah . Khatar maleh, ha u dhiibin xiisaha, jagooyinka u furan wax aan ka badnayn 10% Deposit-ka.
Lacagta maahan waxa ugu weyn nolosha, iyo tan ugu muhiimsan - asxaabta iyo cilaaqaadka. Waxay u badan tahay, go'aan kasta, waxaad aamineysaa asxaabtaada si ka badan waxaadna ugu tabaruceysaa lacagta aad kasbato sadaqo. Laga yaabee inay kafiican tahay in lagu aamino lacagaha maamulka xirfadleyda iyo in la kaydiyo qadar cayiman bil kasta? Feejignaanta ugu yar ee xagga maaliyadda ayaa kuu oggolaan doonta inaadan lumin dhammaan raasamaalkaaga.
Ka taxaddar wax kasta oo la xiriira dhaqaalaha. Isaga, keydintu aad ayey uga muhiimsan tahay isku dhufashada. Anshax iyo dulqaad leh, ayaa si farxad leh u abaabulaya nidaamka ganacsiga, qorsheynaya una qaybinaya lacag. Faa'iidada ayaa doorbideysa inay urursato, halkii ay ku bixin lahayd. Waxaad doorbidi lahayd deebaajiga bangiga oo leh dakhli deggan, inkasta oo dakhligiisu hooseeyo.
Looma baahna in laga baqo. Waxaad tahay nooca dadka si taxaddar leh ama aan gebi ahaanba u ganacsan. Si kastaba ha noqotee, xusuusnow in deebaajiga bangigu aanu bixinaynin 100% dammaanad midkoodna. Waad u qoondeyn kartaa qaar ka mid ah lacagaha diyaar u ah inay halista galaan oo ay ku maalgeliyaan hanti kale oo maaliyadeed.
4. Caqli gal ah.
Kaliya xisaabinta. Deggan, dheellitiran, xiiseynaya dayactirka raasamaalka, marar dhif ah ayaa lagu khaldamaa saadaalinta iyo khamaarka dhexdhexaadka ah. Ruuxda uur-ku-taallo waxay mararka qaarkood toosaysaa inta udhaxeysa boqolleyda go'an, laakiin adigu naftaada ayaa xakameynaya. Cilladaha ugu weyni waa kalsooni buuxda oo qofku ku qabo fikradihiisa u gaarka ah, qofkuna wuxuu u noqon karaa la hayste u noqon karayn khaldankiisa. Suuq firfircoon oo inta badan aan la saadaalin karin ayaa si fudud u dhaafi kara ganacsatadaas.
Naftaada ku xakamee. Waxaad sameysaa istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh ah , laakiin ay kugu adkaato dhaqangelintooda. Lacagtana u isticmaal sidii inaad xalinaysid hawl istiraatiiji ah, in kasta oo ay jirto fursad lagu nasto oo lagu baashaalo. Waxaad isku dayi kartaa inaad ka badbadiso qof walba, laakiin saadaalin la'aanta suuqa waa qodob aad u daran! Had iyo jeer raac xeerarka xeeladda. Dareenka shucuur ma laha marka la xallinayo arrimaha maaliyadeed!
Inteena ugu badan ayaa lagu gartaa isku darka astaamo kala duwan, laakiin midkood ayaa u badan. U fiirsashada dhowr jiil oo ganacsato ah ayaa muujisay in qof kastaa kasban karo. Waa muhiim inaad si sax ah u isticmaasho faa'iidooyinkaaga oo aad doorato qaab ganacsi oo raaxo leh iyo istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah .